देउवालाई रोपाईंमा बोलाउने आँट कसैले गरेन, २२ मन्त्रालयको भारी कहिलेसम्म ?
Sat, Jul 21, 2018 | 19:28:26 NST
10:00 AM ( 1 year ago )
काठमाडौं, साउन २ – हरेक वर्षजस्तै यसपाली पनि असार १५ मा कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको आयोजनामा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रीलाई बोलाउने चलन छ । रोपाईं महोत्सवको प्रमुख अतिथि बनेर पुग्ने कृषि मन्त्रीले खेतमा धान रोप्ने गर्छन् ।
पोहोर र परार धान रोपाईं गर्ने क्रममा दुईजना कृषि मन्त्री विवादित पनि भए । हिलो खेल्ने क्रममा महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालिन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीको मन्त्री पद नै गुम्यो । पोहोरका कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले चाहिँ गमलामा धान रोपेको भन्दै धेरैले हाँसीमजाक गरे ।
तर अहिलेको सरकारमा कृषि मन्त्री छैनन् । मन्त्रीको टुंगो लाग्न बाँकी अरु मन्त्रालयजस्तै कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्नुभएको छ । कृषि मन्त्री समेत रहेका देउवालाई धान रोपार्इंमा बोलाउने कि नबोलाउने भनेर आयोजक अलमलमा परे । एक त प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता, अर्को धान रोपाईं गर्न मान्ने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता । त्यसैले बोलाउनुभन्दा नबोलाउनु नै भन्ने उचित लागेर आयोजकले मन्त्रीको सट्टा योजना आयोगमा कृषि हेर्ने सहसचिवको प्रमुख आतिथ्यमा धान दिवस कार्यक्रम गरे । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको सट्टा अर्कोले लिएको भए स्वयं मन्त्री नै रोपाईं कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपथ्र्यो ।
देउवा २२ मन्त्रालयका मन्त्री !
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ । गएको जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गरी ७ मन्त्रालयको टुंगो लागेको छ । २२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै लिनुभएको छ । मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसकेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको देउवाको नाम टाँसिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अरु मन्त्रालयमा जाने फुर्सद देउवालाई छैन । त्यसैले मन्त्रीको नाममा ‘शेरबहादुर देउवा’ लेखिएका मन्त्रालय अभिभावकबिनाको परिवारजस्तो भएका छन् । नियमित काम त भैरहेका छन्, तर मन्त्रीलाई गुनासो सुनाउन पुग्ने सेवाग्राहीले मन्त्रालयमा भरपर्दो मान्छे भेटेका छैनन् । कर्मचारीलाई कार्यविधि बनाउन र नीतिगत निर्णय लिन पनि समस्या भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको जिम्मामा रहेका मन्त्रालय कुन कुन ?
आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपंक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुननिर्माण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य ।
भागबण्डा मिलाउन सकस
नयाँ सरकार गठनको बेला ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने तथा अरु मन्त्रालय साना दललाई दिने सहमति भएपनि कुन कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अहिले लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्री सहित स्थानीय विकास, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महराले उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र र कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री सहित कानुन र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
यस्तै विना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शपथ खाएका माओवादीका प्रभु साहले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभएको छ । यस्तै कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ, फरमुल्लाह मंसुर श्रम तथा रोजगार र जनार्दन शर्मा गृह मन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेका मन्त्रालय राप्रपा र साना दललाई समेत छुट्याइएको छ । तर राप्रपा सरकारमा जाने, नजाने टुंगो लागिसकेको छैन । संविधान संशोधन र मन्त्रालयको भागबण्डामा एकसाथ सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको योजना हो । तर संविधान संशोधन र सरकारमा जानेबारे राप्रपाभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको छ । अब राप्रपा नआएपनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी छ ।
केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गरी अनौपचारिक छलफल भैरहेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । शीर्ष नेताहरुबिच औपचारिक छलफलपछि केही दिनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार गठनलगायत विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहनुभएका नेता लेखकका अनुसार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे कार्यदलको तर्फबाट गृहकार्य सकिएको छ । तर कार्यदलमा मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो भने लागिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार, उर्जा लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका दुवै दलले दावी गरेका छन् ।